​ऋषि बरालको पहिलो कृति पैतालाका डोबहरु
​ऋषि बरालको पहिलो कृति पैतालाका डोबहरु
काठमाडौं । ऋषि बरालको पहिलो कृतिका रुपमा आएको पैतालाका डोबहरु मुक्तकसङ्ग्रहको बिमोचन भएको छ ।
काठमाडौको अनामनगरमा रहेको मिडिया इन्टरनेसनलको सभाहलमा बिहिबार एक भब्य कार्यक्रमकाबिच बरिष्ठ कवि एवम् गीतकार रत्नशम्शेर थापाले कृतिको बिमोचन गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा कृतिका बारेमा समालोचनात्मक टिप्पणी त्रिबिबिका प्रा.डा. खगेन्द्रप्रसाद लुईटेलले गरेका थिए । उनले मुक्तकका सैद्धान्तिक र लेखन शैलिका बारेमा प्रकाश पार्दै मुक्तकका बारेमा रहेका अन्योल र भ्रमका बारेमा समेत जानकारी गराएका थिए ।
कार्यक्रममा स्थापित कवि तथा कवयत्रि, पत्रकार, लेखक, समिक्षक, समालोचक एवम् समकालिन मुक्तक लेखनमा लागेका स्रष्टा तथा सर्जकहरुको बिशेष उपस्थिति थियो । प्रतिष्ठानका महासचिव एवम् बरिष्ठ मुक्तककार रमेश पौडेलले बरालका मुक्तक सङ्ग्रहमा सङ्गृहीत मुक्तकका बारेमा समिक्षा गरेका थिए । उनले बरालका मुक्तकमा माया, प्रेम, घरदेश र परदेशका सुख दुख तथा मानविय प्रवृत्तिका सुन्दर छनक पाउन सकिने बताए ।
कार्यक्रमको सभाध्यक्ष नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवम् मुक्तककार रामकाजी कोनेले गरेबम थिए भने नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका सचिव बादल घिमिरेले कार्यक्रमको संचालन गरेका थिए । पैतालाको डोबहरु नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानले प्रकाशनमा ल्याएको हो । यस कृतिभित्र जम्माजम्मी २१६वटा विभिन्न परिवेश र समयमा बरालद्धारा सृजित चतुष्पदीय छन्दका मुक्तकहरु समेटीएका छन् भने उनका मुक्तकले वर्तमानको युगीन परीवेशलाई स्पष्ट सम्बोधन गर्न सफल भएका छन् । ९६ पृष्ठ रहेको यस सङ्ग्रहको मुल्य रु. १७५/– रहेको छ ।
आवरण कलामा बरिष्ठ कवि एवम् रेडियो नेपालका रमेश पौडेलले रङ् भरेका थिए । पुस्तकको डिजाइन चितवनका स्थापित डिजाइनर दीपेन्द्र कुमार जोशी निकले गरेका थिए । डा. लक्ष्मणप्रसाद गौतमको भूमिका लेखन रहेको उक्त कृतिमा मुक्तककार रमेश पौडेल र बरिष्ठ हाइकुकार एवम् कवि प्रकाश पौडेल माइलाका शुभकामनारुपी मन्तव्यहरु समेत रहेका छन् । सर्जक ऋषि बरालले मुक्तकसङ्ग्रह लेखन प्रकाशनका क्रममा आफूले भोगेका अनुभवहरुलाई साटासाट गर्दै कृतिभित्रका केही मुक्तकहरु समेत वाचन गरेका थिए ।
नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका विष्णुबहादुर सिंहले स्वागत मन्तव्य गर्नुभएको थियो भने बरालका मुक्तक कृतिबाट केही मुक्तकहरु मुक्तककार एवम् गीतकार प्रकाश सुवेदी र कवयत्रि शान्तिशर्माले वाचन गरेर सुनाएका थिए । आमन्त्रित अतिथि, विशिष्ट अतिथि, प्रमुख अतिथि कार्यक्रम सञ्चालक, सभाध्यक्षसबैलाई खादा ओढाएर सम्मान गर्नुकासाथै पैतालाका डोबहरुको सम्झनारुपी मायाको चिनो समेत दिएका थिए ।